SOMBON’NY AINA …
SOMBIN’NY AINA …
Sombin’ny aina, teny iray heno miverimberina ;
Voatonina matetika, impolo in-jato isan’andro.
Misy dikany izany, aleo foana mitamberina
Satria teny manan-danja, tsy mety lany andro.
Sombin’ny aina, tena mamin’i dada sy neny ;
Nampitaintaina matetika na antoandro na alina.
Nikatsahana foana, ny mety hahasoa azy ireny ;
Ho rehareha amin’izay ezaka rehetra sahanina
Sombin’ny aina, maro ireo olana mety mandalo.
Aza hadino anefa, fa ilay Tompo Andriamanitra ;
Mandefa tsy ankiato ny anjeliny avy any an-danitra ;
Hiaro anao foana, amin’izay mety ho fahavalo.
Sombin’ny aina, mbola ho avy koa ny andro ;
Hitenanao koa ny hoe : ireo « sombin’ny aiko » ;
Tena tsy foiko, ary tsy hatoriko, satria tena tiako.
Raha toa ka mbola miposaka koa ny masoandro.